EyoMsintsi. Iincwadana ezi-6 zoncwadi lweendidi ngeendidi | Uncwadi lwangoku
Ngoku singene NgoSeptemba. Ekugqibeleni. Into eseleyo yeyokuba iindaba zokuphola ziyeza kwaye imimoya yasekwindla iqala ukuvuthuza. Ke ngoku ndilindileyo, ndibona ezimbalwa iindaba ezakuphuma kule nyanga. Izihloko ezingama-6 kubafundi ezahlukeneyo kunye nezinto abazithandayo: umntwana, ulutsha, imbali, ebalisayo okanye omnyama.
1 Indoda eneDynamite-uHenning Mankell
2 Idabi leBhulorho- uAntony Beevor
3 Amakhosazana aseVienna-iTea Stilton
4 Igama lam ndinguVioleta - Santi Anaya
5 Igolide yoLwandle- UDaniel Wolf
6 Uhambo-UDavid Baldacci
Indoda yaseDynamite -UHenning Mankell
Inkqubo ye- inoveli yokuqala yombhali ophumeleleyo nolindelwe ixesha elide waseSweden wohlobo olumnyama. Eli yayilibali elibuhlungu, elisekulo ngoku, malunga nabasebenzi ngamaxesha anzima.
Isenzo sisisa I-Norrköping, eSweden 1911. Imithombo yeendaba iyangqinelana nokusweleka ngo ingozi embi yomdidiyeli oselula ogama lingu U-Oskar johansson iveliswe ngexesha lokuqhushumba kwetonela. Nangona kunjalo, i-Oskar wasinda kodwa nangona wonzakele kakhulu kwaye waba neziphumo ezibi. Nangona kunjalo, yaqhubeka isebenza ade athathe umhlala-phantsi. Wahlala de kwangowe-1969.
UMankell ubalisa eli bali lobomi buka-Oskar Ngamazwi neembono ezahlukeneyo. Iziphumo ngu I-fresco enkulu yemeko yabasebenzi Kwisiqingatha sokuqala senkulungwane yama-XNUMX.
Idabi leebhulorho -U-Antony Beevor
IBritish Beevor, mhlawumbi umbhali-mbali wezomkhosi odumileyo wangoku, utyikitya esinye sezihloko zakhe zemfazwe kubathandi belo hlobo.
Kwakhona ngesiseko samaxwebhu amakhulu nachanekileyo, asetyenziswe apha okokuqala, uBevorh usisa kuwo NgoSeptemba 1944. Imikhosi emanyeneyo yayiqhubeka Holland kwaye babelungiselela ukuwela Rin Ukuhlasela iJamani. Kodwa kwisixeko sase UArnhem uloyiso lwakutsha nje lwaseJamani lubonakale lutsala ungquzulwano ixesha elide kunokuba bekulindelwe.
I-Beevor ngobuchule ibalisa ubunyani baloo mihla ngokuchopha kwiidayari kunye nobungqina bakho abo axhomekeke kubo kakhulu amava ye Iisadados kumlo njengebali lokubandezeleka kwe Inani labemi ukusuka kwiArnhem.
Amakhosazana aseVienna - Iti stilton
A phakathi NgoSeptemba kuza i-adventure entsha kwinqaku le- Iti stilton. Ithunyelwe ngqo kubafundi abavela 7 iminyaka, sele elandelwe kwaye edume njengaleyo yomntakwabo, UGeronimo Stilton.
Masikhumbule ukuba i-Tea Stilton, ihlala izimisele kwaye inenkalipho, ngummeli okhethekileyo Isandi seRodent, Iphephandaba eliqhutywa ngumntakwabo uGeronimo. Kolu ngcelele lwenkwenkwezi yeTi, usixelela ngeziganeko zakhe ezininzi kwihlabathi liphela nabanye abahlobo abane. Zonke zenza Iklabhu yeeTi, apho ifayile ye- ubuhlobo, ubuqili kunye nophando oluyimfihlo abazivumeli ukuba bame umzuzwana.
Kule meko sihamba nabo ukuya EVienna. Apho baya kuthatha inxaxheba Ukhuphiswano lwekhekhe, Baza kuya kwibhola yebhotwe kwaye kuya kufuneka baphande kwaye bafumanise isela leresiphi. Njengesiqhelo kuthotho, i uhlelo olunomtsalane isicatshulwa sokubhala kunye Inqaku le-didactic kwimisebenzi Ekugqibeleni ukongeza ukuzonwabisa. Ndiyangqina ngamehlo omtshana wam oneminyaka esi-8 ubudala, obenexesha elimnandi kwelihlobo ebetyelele nabo eLondon.
Igama lam yi-violet -Santi Anaya
Ukuphela kukaSeptemba Le noveli ipapashwa kubaphulaphuli abancinci ukusuka kwiminyaka eli-14. Yi ibali liphefumlelwe bubomi bentombi ka Umlinganiswa onempikiswano kwaye kwangaxeshanye enomdla njengomdlali weqonga UNacho Vidal. Isihloko sokuzisa nokwenza kubonakale ifayile ye- Ukuxhatshazwa ngokwesini kubantu abatsha.
Siyazi Violet, eyintombazana entsha evela kwiziko. Akukho mntu ulaziyo elidlulileyo kwaye oko kulungele yena kuba oko kuthetha ukuba akukho mntu waziyo de abe neminyaka emihlanu ubudala ibinguNacho kwaye wonke umntu wayemphatha njengongekhoyo: umntwana. Ngoku yonke into iya isiba nzima xa edibana noAndrés. Uthanda inkwenkwe okokuqala kwaye uziva ngathi kufuneka umxelele inyani. Kodwa ngalo lonke ixesha ezama, akakwazi kuba esoyika impendulo kaAndres.
Igolide yolwandle -UDaniel Wolf
Ekupheleni kwakhona, NgoSeptemba 20, Oku kuyaphuma inoveli yembali Ityikitywe ngulo mbhali ithathela ingqalelo isiJamani "uKen Follet". Phakathi kwezihloko zakhe ezaziwa kakhulu zezi Ukukhanya komhlaba o Ityuwa yomhlaba.
Kweli bali sidibana nabazalwana I-Balian kunye neBlanche Fleury, inzala yosapho lwabarhwebi abavela eVarennes Saint-Jacques. Xa usokola Intlungu yosapho kunye nezoqoqosho, Qalisa a uhambo lwezorhwebo kwisiqithi esikude saseGotland. Bafuna ukugcina ishishini lookhokho babo ngazo zonke iindleko. Nangona kunjalo, ubutsha babo bukwabakhokelela khangela ukuzonwabisa kunye nothando. Phambi kwabo baya kudibana nabanamandla Iraphuli, Intsapho yabarhwebi abanganyanisekanga abaya kwenza konke okusemandleni ukugcina amandla abo eBaltic.
Ukubaleka -UDavid Baldacci
Kwaye ndigqibezela nge-American Baldacci, yabo ngosuku olulandelayo 6 Septemba incwadi yakhe entsha iyaphuma. Ingaba u okwesithathu ukusuka kwizenzo kunye nocwangco kuthotho lwearhente UJohn puller, umkhosi wangaphambili wemikhosi ekhethekileyo kwaye ngoku umphandi. Ndayifunda kwakudala kwaye yandonwabisa kakhulu, ngokufana nezimbini ezidlulileyo, Usuku zero y Abalibalekileyo.
Kule nto sinayo URobert, umntakwabo John, owagwetyelwa ityala ukungcatshwa okuphezulu nolwaphulo-mthetho ngokuchasene nokhuseleko lwesizwe. Uvalelwe kweyona ntolongo ibalulekileyo nekhuselekileyo yasemkhosini ukubaleka okungathethekiyo kumenza esona saphuli-mthetho sifunwayo kweli lizwe. Ukusuka kurhulumente abaninzi bacinga njalo eyona ibalaseleyo yokumbamba bhuti wakhe nguJohn.
Ugqiba kwelokuba amkele Umsebenzi yintoni i kunzima emsebenzini wakhe. Kodwa uya kufumanisa ngokukhawuleza ukuba kwa aba bantu bagwebe umntakwenu bafuna ukuba afe. Kwaye ayinguye yedwa. Xa aba dade babini bedibana Kuya kufuneka babone ukuba mabenze ntoni na ukuze bajongane kwaye bangakhuphi abo babatshutshisayo.
Imithombo: IPlanethi yeencwadi-Fnac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » EyoMsintsi. Zi-6 ezintsha zoncwadi zeentlobo ngeentlobo
Iincwadi eziGqwesileyo zaseYurophu